Sawirro: Axmed Madoobe oo tegay Gedo kadib wareegtadii kasoo badxay Farmaajo - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Axmed Madoobe oo tegay Gedo kadib wareegtadii kasoo badxay Farmaajo
Ceelwaaq (Caasimada Online) – Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam, ayaa maanta gaaray Gobolka Gedo, halkaas oo ay kasocoto doorashada Xildhibaanada Baarlamaanka ee kasoo baxaya deegaan doorashada labaad ee Jubaland.
Axmed Madoobe ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Ceelwaaq kusoo dhaweeyay qaar kamid ah golaha wasiirada, oo horey u joogay magaalada iyo maamulka magaalada.
Qoraal kasoo baxay madaxtooyada Jubaland ayaa lagu yiri “Waxaa Madaxweynahu uu tagay halka ay ka socoto doorashooyinka deegaan doorashada labaad ee Jubaland ee lagu dooranayo Xildhibaanada loo asteeyay gobolka Gedo inay ku matalaan Baarlamaanka JFS.”
“Madaxweynahu wuxuu goob joog ka ahaa doorashada hal kursi oo kamid ah kuraasta maanta lagu doortay Degmada Ceelwaaq isagoo u kuur galayay habsami u socodka doorashooyinka ayuu Madaxweynahu uga mahad celiyay guddiyada doorashooyinka ee kala duwan dadaalka aan kala go’a lahayn ee ay howshan ku bixiyeen.”
Safarka Axmed Madoobe ayaa imanaya ayada oo goor sii horeysay oo maanta ah uu Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sharci-darro ku tilmaamay “doorashooyinka isbarbar socda” ee magaalooyinka Ceelwaaq iyo Garbahaareey.
Farmajao ayaa dalbaday in la xushmeeyo heshiiskii 17-kii September 2020 iyo habraacyadii ku lifaaqnaa ee ay xubnaha Madasha Wadatashiga Qaran kala saxiixeen 1-dii October 2020 iyo 27-kii May 2021.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in wax ka baddalka Heshiiskii 17-kii September iyo habraacyadii ku lifaaqnaa ay u baahan yihiin heshiis siyaasadeed oo ay dib uga wada xaajoodaan xubnaha Madasha Wadatashiga Qaran, isagoo faray inay degdeg isugu yimaadaan si xal dhammeystiran loogu helo kuraasta 16-ka ah ee ku astaysan Garbahaareey.